RASMI: Marc Bartra oo ka tegaya Barcelona (Kooxdee ku biirayaa?) – Gool FM
(Barcelona) 03 Juunyo 2016 – Dambeedka dambe ee Marc Bartra ayaa soo afjaray 14 sano oo uu la joogey kooxdii carruurnimadiisii ee Barcelina isagoo ku biiray kooxda reer Bundesliga ee Borussia Dortmund.
Kooxda Blaugrana ayaa xaqiijisay in Marc Bartra uu kooxda ka tegayo xagaagan isagoo ka mid noqon doona kooxda Borussia Dortmund.
Naadigan Jarmanka ayaa isna webkiisa ku faafiyey inuu qandaraas 4 sanadood ah la galay laacibkan kaasoo taxnaan doona tan iyo 30-ka Juunyo 202o, waloow ay kooxda Thomas Tuchel ay weli u baahan tahay in ay daafacan 25-jirka ah la meel dhigto tibxaha heshiiska.
Laacibkan ayaa ku biiraya Dani Alves oo ka socda Camp Nou, halka aanu weli kala caddeeyn mustaqbalka Mascherano oo isna laga yaabo inuu ka tago Catalonia.
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 juni 2016
Ronaldinho oo Filim cusub la soo wada aktarka caanka ah ee Jean-Claude Van Damme...(Waa maxay doorka uu filimka ku jilayo?)+SAWIRRO